सामाजिक मिडिया मार्केटिंगको प्रभाव के हो? | Martech Zone
सामाजिक मिडिया मार्केटिंगको प्रभाव के हो?
बिहीबार, जुलाई 1, 2021 बिहीबार, जुलाई 1, 2021 Douglas Karr
सामाजिक मिडिया मार्केटिंग भनेको के हो? मलाई थाहा छ कि यो प्राथमिक प्रश्न जस्तो लाग्छ, तर यो केहि छलफलको लागि योग्य छ। त्यहाँ एक महान सामाजिक मिडिया मार्केटिंग रणनीति को साथ धेरै आयामहरू छन् साथै सामग्री, खोज, ईमेल र मोबाइल जस्ता अन्य च्यानल रणनीतिका लागि यसको आबद्ध सम्बन्ध।
मार्केटिंगको परिभाषामा फर्कौं। मार्केटिंग अनुसन्धान, योजना, कार्यान्वयन, बढावा र उत्पाद वा सेवाहरूको बिक्रीको कार्य वा व्यवसाय हो। सामाजिक मिडिया एक संचार माध्यम हो जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई सामग्री सिर्जना गर्न, सामग्री साझा गर्न वा सामाजिक नेटवर्कि inमा भाग लिन सक्षम गर्दछ। माध्यमको रूपमा सामाजिक मिडिया दुई कारणका लागि परम्परागत मिडिया भन्दा धेरै फरक छ। पहिलो, गतिविधि धेरै हदसम्म सार्वजनिक हो र अनुसन्धानका लागि मार्केटरहरूको लागि पहुँच योग्य हुन्छ। दोस्रो, मध्यम दुबै दिशात्मक संचारको लागि अनुमति दिन्छ - दुबै प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष।
विश्वव्यापी रूपमा media.3.78 अरब सोशल मिडिया प्रयोगकर्ताहरू छन् र यो संख्या आगामी केही बर्षहरूमा बढ्दो क्रममा रहनेछ। जस्तो यो खडा हुन्छ, जुन 48 XNUMX प्रतिशतको बराबर हुन्छ वर्तमान विश्व जनसंख्या.
सामाजिक मिडिया मार्केटिंग भनेको के हो?
एक बलियो सामाजिक मिडिया मार्केटि strategy रणनीति दुबै सामाजिक मिडिया को बिभिन्न सुविधाहरु को रूप मा साथै लाभ उठाउने विधिहरु जसको द्वारा एक ब्रान्ड निगरानी र पदोन्नति गर्न सकिन्छ लाई सम्मिलित गर्नु पर्छ। यसको मतलब यो हो कि एक रणनीति एक दिन २ ट्वीट पुश गर्न को लागी एक पूर्ण रूप मा समाहित सामाजिक मिडिया रणनीति छैन। एक पूर्ण रणनीति को लागी उपकरण र पद्धतिहरु लाई शामिल गर्दछ:
बजार अनुसन्धान - राम्रो खोजको लागि जानकारी स Collect्कलन र तपाईंको दर्शकहरूसँग बुझ्नुहोस् र कुराकानी गर्नुहोस्।
सामाजिक सुन्न - निगरानी र ग्राहक सेवा वा बिक्री अनुरोध सहित तपाइँको दर्शकहरुबाट प्रत्यक्ष अनुरोधलाई प्रतिक्रिया।
प्रतिष्ठा प्रबंधन - संरक्षण र तपाईंको व्यक्तिगत वा ब्रान्ड प्रतिष्ठा सुधार, समीक्षा मोनिटरिंग, स and्कलन, र प्रकाशन सहित।
सामाजिक प्रकाशन - योजना, तालिका, र प्रकाशन सामग्री जसले तपाईंको सम्भावित ग्राहकहरूलाई जागरूकता र मूल्य प्रदान गर्दछ, कसरी गर्ने, प्रशंसापत्र, सोच्ने नेतृत्व, उत्पादन समीक्षा, समाचार, र मनोरन्जन सहित।
सामाजिक संजाल - सक्रिय रूपमा रणनीतिहरूमा संलग्न गरीरहेको छ जसले तपाइँको प्रभावहरू प्रभावकर्ताहरू, सम्भावितहरू, ग्राहकहरू, र कर्मचारीहरूमा पुग्दछ।
सामाजिक पदोन्नती - प्रचारात्मक रणनीतिहरू जुन विज्ञापन, प्रस्तावहरू, र वकालत सहित व्यापार परिणामहरू ड्राइभ गर्दछ। यसले तपाईंको प्रमोशनहरू उनीहरूको नेटवर्कमा विस्तार गर्नको लागि प्रभावकारीहरू पत्ता लगाउने र भर्ती गर्न विस्तार गर्न सक्दछ।
व्यापार परिणाम सधैं वास्तविक खरीद हुन छैन, तर तिनीहरू जागरूकता, विश्वास, र प्राधिकरण निर्माण गर्न सकिन्छ। वास्तव मा, सामाजिक मिडिया कहिलेकाहिँ एक इष्टतम माध्यम प्रत्यक्ष खरीद ड्राइव गर्न को लागी छैन।
73 XNUMX% मार्केटरहरू विश्वास गर्छन् कि सामाजिक मिडिया मार्केटिंग मार्फत उनीहरूको प्रयास उनीहरूको व्यवसायका लागि केही प्रभावकारी वा धेरै प्रभावकारी भएको छ।
सामाजिक सञ्जाल प्राय: मुख को शब्द, अनुसन्धान को लागी छलफल को एक स्रोत, र एक स्रोत को लागी जडान गर्न को लागी प्रयोग गरीन्छ - मानिसहरु को माध्यम बाट - एक कम्पनी को लागी। किनकि यो द्वि-दिशात्मक हो, यो अन्य मार्केटि channels च्यानलहरु बाट एकदमै अद्वितीय छ।
Media१% उपभोक्ताहरू जसले सामाजिक मिडियामा एक ब्रान्डको साथ सकारात्मक अनुभव गरेका छन् आफ्ना साथी र परिवारलाई ब्राण्ड सिफारिश गर्दछ।
हेर्नुहोस् Martech Zoneको सामाजिक मिडिया सांख्यिकी इन्फोग्राफिक
सामाजिक मिडिया माध्यमहरू र उदाहरण प्रयोगहरू
सामाजिक मिडिया प्रयोगकर्ताहरूको% 54% सामाजिक उत्पादहरू अनुसन्धानको लागि प्रयोग गर्दछ।
बजार अनुसन्धान -मँ अहिले एक ड्रेस निर्माता संग काम गरीरहेको छु जो आफ्नो प्रत्यक्ष उपभोक्ता ब्रान्ड अनलाइन शुरू गरीरहेको छ। हामी सामाजिक सुन्ने को उपयोग गरीरहेका छौं कि कीवर्डहरु लाई लक्षित गर्न को लागी लक्षित उपभोक्ताहरु जब शीर्ष प्रतियोगीहरु को बारे मा बोल्ने को लागी प्रयोग गरीरहेछौं कि हामी हाम्रो शब्दावली लाई हाम्रो ब्रान्डि efforts्ग प्रयासहरुमा सामेल गर्न सक्छौं।
सामाजिक सुन्न - मसँग मेरो व्यक्तिगत ब्रान्ड र यस साइटको लागि सतर्कताहरू सेट अप गरिएको छ ताकि मैले मेरा उल्लेखहरू अनलाइन देखेको छु र तिनीहरूलाई सीधा जवाफ दिन सक्छु। सबैले पोष्टमा ब्राण्ड ट्याग गर्दैनन्, यसैले सुनुवाई महत्त्वपूर्ण छ।
प्रतिष्ठा प्रबंधन - म दुई स्थानीय ब्रान्डहरु मसँग काम गरीरहेको छु कि हामी उनीहरुका ग्राहकहरु को लागी स्वचालित समीक्षा अनुरोधहरु लाई सेट अप गरेका छौं। प्रत्येक समीक्षा स collected्कलन र प्रतिक्रिया छ, र खुसी ग्राहकहरु लाई अनलाइन आफ्नो समीक्षा साझा गर्न को लागी धकेलिएको छ। यसले स्थानीय खोज परिणामहरुमा दृश्यता बढाएको छ।
सामाजिक प्रकाशन - म धेरै कम्पनीहरूसँग काम गर्छु जुन सामग्री क्यालेन्डरहरू ब्यवस्थापन गर्छन् र तिनीहरूको तालिका प्रयासहरू केन्द्रिकृत गर्दछ Agorapulse (म एक राजदूत हुँ)। यो उनीहरुलाई समय को एक टन बचाउँछ किनकि उनीहरु बाहिर जाने र सीधै हरेक माध्यम को प्रबंधन गर्न को लागी छैन। हामी समेट्छौं अभियान UTM ट्यागिंग ताकि हामी हेर्न सक्दछौं कि कसरी सोशल मिडिया ट्राफिक र आफ्नो साइटमा रूपान्तरण ड्राइभ गर्दैछ।
सामाजिक संजाल - म सक्रिय रूप मा एक प्लेटफर्म को उपयोग गरीरहेको छु जसले मलाई पहिचान गर्न र प्रभावशाली व्यक्तिहरु र संगठनहरु संग जोडिएको छ कि मलाई LinkedIn मा भाडामा लिन सक्छ। यो मेरो बोल्ने अवसर मा एक पर्याप्त प्रभाव पारेको छ र मेरो कम्पनी लाई यसको बिक्री बढ्न मद्दत गरेको छ।
सामाजिक पदोन्नती - मेरा धेरै ग्राहकहरूले सामाजिक मिडिया विज्ञापन समावेश गर्दछ जब उनीहरू घटनाहरू, वेबिनरहरू, वा बिक्री प्रचार गर्दछन्। यी विज्ञापन प्लेटफार्महरू प्रदान अविश्वसनीय लक्ष्य अविश्वसनीय रूप से उपयोगी छ।
मलाई थाहा छ कि तपाईं केहि जटिल सामाजिक मिडिया अभियानहरू निर्माण गर्न सक्नुहुनेछ जुन मेरो विकल्पहरूसँग मेल नखाने तरिकामा प्रयोगहरू र माध्यमहरू समावेश गर्दछ। म केवल प्रत्येक माध्यमको केहि सामान्य उपयोगहरु बाहिर फालिरहेको छु कि तिनीहरु लाई कसरी बिभिन्न तरिकाले प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्नेमा केही अन्तरदृष्टि प्रदान गर्न।
धेरै मार्केटरहरू शीतल मध्यमतिर वा तिनीहरू सबै भन्दा सहजै एक किसिमको गुरुत्वाकर्षण गर्छन्। यो एक दुर्घटना हुनको लागि प्रतिक्षा गर्दैछ किनकि उनीहरूले भरपर्दो माध्यमिक माध्यमलाई उनीहरूको पूर्ण क्षमतामा जोड्दै छैनन्।
कसरी व्यवसायहरू सामाजिक मिडिया प्रयोग गर्दै
तपाइँको ब्रान्ड प्रदर्शन गर्नुहोस् - मुखको शब्द अविश्वसनीय रूपले प्रभावकारी छ किनकि यो अत्यन्त प्रासंगिक छ। एक विशिष्ट उद्योगका व्यक्तिहरू, उदाहरणको रूपमा, अक्सर सोशल मिडिया च्यानलहरू र समूहहरूमा भेला हुन्छन्। यदि एक व्यक्तिले तपाइँको ब्रान्ड, उत्पादन वा सेवा साझा गर्दछ भने, यो उच्च व्यस्त दर्शकहरु द्वारा हेर्न र साझेदारी गर्न सकिन्छ।
एक वफादार समुदाय को विकास गर्नुहोस् - यदि तपाईंसँग तपाईंको श्रोताको लागि मूल्य प्रदान गर्ने एक प्रभावशाली सामाजिक रणनीति छ भने- या त सिधा सहायता, क्युरेट सामग्री, वा अन्य समाचारहरू, सुझावहरू र युक्तिहरूद्वारा तपाईंको समुदायले तपाईंलाई प्रशंसा र विश्वास बढाउँनेछ। ट्रस्ट र अख्तियार कुनै पनि खरीद निर्णयको महत्त्वपूर्ण तत्व हुन्।
ग्राहक सेवा सुधार गर्नुहोस् - जब तपाईंको ग्राहकले तपाईंलाई सहयोगको लागि बोलाउँदछ, यो १: १ कुराकानी हो। तर जब एक ग्राहक सोशल मिडियामा पुग्छ, तपाईंको दर्शकहरूले तपाईं कसरी प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ र उनीहरूको आवश्यकतालाई प्रतिक्रिया देखाउँछन्। महान ग्राहक सेवा विश्व को हरेक कुनामा देखि गूँज्न सकिन्छ ... र ग्राहक सेवा आपतकाल।
डिजिटल एक्सपोजर बढाउनुहोस् - किन उत्पाद सामग्री साझा र प्रचार गर्न को रणनीति बिना? सामग्री विकास गर्नुको मतलब छैन यदि तपाईंले यो बनाउनुभयो भने, तिनीहरू आउनेछन्। तिनीहरूले गर्दैनन्। त्यसैले एक महान सामाजिक नेटवर्क निर्माण जहाँ समुदाय ब्रान्ड अधिवक्ता बन्छ अविश्वसनीय रूपमा शक्तिशाली छ।
यातायात र SEO लाई बढावा दिनुहोस् - जब खोज इन्जिनले लि links्कहरू, फ्यानहरू र अनुयायीहरूलाई खोज इन्जिनको श्रेणीमा प्रत्यक्ष कारकको रूपमा बाहिर राख्दछन्, त्यहाँ कुनै श doubt्का छैन भन्ने कुरामा कुनै श doubt्का छैन। सामाजिक मिडिया रणनीति महान खोज इञ्जिन परिणाम ड्राइभ हुनेछ.
बिक्री विस्तार गर्नुहोस् र नयाँ दर्शकहरूमा पुग्नुहोस् - यो प्रमाणित छ एक सामाजिक मिडिया रणनीति outsell समावेश जो व्यक्ति बिक्री जो गर्दैनन्। साथै, तपाईंको बिक्री व्यक्तिहरू बिक्री प्रक्रियामा नकारात्मक प्रतिक्रियालाई कसरी व्यवहार गर्ने भनेर बुझ्दछन् किनकि उनीहरू दिनदिनै मानिसहरूसँग बोल्छन्। तपाईंको बजार विभाग प्राय: गर्दैन। तपाइँको बिक्री प्रतिनिधिहरु एक सामाजिक उपस्थिति निर्माण को लागी तपाइँको पहुंच को विस्तार को एक भयानक माध्यम हो।
मार्केटिंग लागत कटौती गर्नुहोस् - जबकि यसको गति चाहिन्छ, सामाजिक मिडियामा निम्न, सेयरहरू, र क्लिकहरूको लागि बढ्दो प्रवृत्तिले माग बढाउँदा लागतलाई तल झार्नेछ। त्यहाँ कम्पनीहरूको अविश्वसनीय कथाहरू छन् जो ब्रेकबाट विस्तार हुँदै विस्तारमा अद्वितीय सामाजिक मिडिया उपस्थितिको निर्माण पछि बनाउँदैछन्। यसको लागि एक रणनीति आवश्यक छ जुन धेरै कर्पोरेट संस्कृतिहरूको काउन्टर हुन सक्छ। त्यहाँ धेरै कम्पनीहरू छन् जुन सोशल मिडियामा डरलाग्दो छ र केवल आफ्नो समय बर्बाद गर्दैछ।
%%% उपभोक्ताहरू दावी गर्छन् कि उनीहरूको खरीद निर्णय सूचित गर्न उनीहरू सोशल मीडियामा प्रभावकारी सिफारिशहरूमा निर्भर छन्।
यी मध्ये प्रत्येक भित्र तपाइँको ग्राहकहरु को अधिग्रहण र रिटेन्शन को बृद्धि गर्नका साथै उनीहरु को ग्राहक यात्रा को लागी upsell को माध्यम हो।
सामाजिक मिडिया को प्रभाव
जबकि म सधैं मेरो ग्राहकहरु लाई पुरा तरिकाले हरेक सामाजिक मिडिया अभ्यास मा लगानी गर्न को लागी धक्का छैन, म लगानी मा एक निरन्तर फिर्ता देख्छु जब मेरा ग्राहकहरु लाई आफ्नो प्रतिष्ठा को प्रबंधन र आफ्नो अनुयायीहरु संग अनलाइन मूल्य निर्माण। कुनै पनी अवस्थामा, सोशल मिडिया को शक्ति लाई बेवास्ता गर्न को लागी एक ब्रान्ड को खतरा मा हुन सक्छ यदि उनीहरु एक ग्राहक सेवा मुद्दा को गलत व्यवस्थापन गर्छन्। तपाइँका ग्राहकहरु तपाइँ उपस्थित हुन को लागी कुञ्जी सोशल मिडिया प्लेटफर्महरुमा एक समय मा ढंग बाट प्रतिक्रिया गर्न को लागी आशा गरीरहेका छन् ... उपकरण र रणनीतिहरु यो गर्न को लागी आवश्यक छ।
टैग: फेसबुकफेसबुक मार्केटिंगलिin्कडिन मार्केटिंगबजार अनुसन्धानअनलाइन प्रतिष्ठाPinterestप्रतिष्ठाप्रतिष्ठा व्यवस्थापनसमीक्षासामाजिक श्रवणसामाजिक मीडिया विज्ञापनसामाजिक मिडिया आशयसामाजिक मिडिया मार्केटिङसामाजिक मिडिया पदोन्नतिसामाजिक मिडिया प्रतिष्ठासामाजिक संजालसामाजिक पदोन्नतीसामाजिक प्रकाशनटिक टकyoutube marketing
प्रभावी मोबाइल अनुप्रयोग पुश सूचना स Eng्लग्नताको लागि शीर्ष कारकहरू
जनवरी 6, 2009 मा 7: 38 एएम
म थप सहमत हुन सकिन, म एक पार्टीमा मेरो भिडियो कार्य संगीतकारहरूलाई पिच गर्ने प्रयासमा एक हुन प्रयोग गर्छु! र यदि तिनीहरूले चासो राखेका थिए भने, तिनीहरू सही मानसिकतामा थिएनन्, तिनीहरू अनलाइन हुँदा र मेरो साइट फेला पार्नुहोस् र त्यसपछि मेरो काम हेरेर केही समय खर्च गर्नुहोस्, अब ग्राहकहरूले मलाई सम्पर्क गर्छन्।
जहाँसम्म आफैलाई निजीकृत गर्न भिडियो प्रयोग गर्ने कुरामा, के यो केवल अनुक्रमित शब्दहरूका लागि पोष्टहरू लेख्नमा टाँसिनु राम्रो हो वा के तपाईंलाई भ्लगिङ पनि राम्रो विचार हो जस्तो लाग्छ?
जनवरी 6, 2009 मा 8: 09 एएम
धन्यवाद! खोजी सर्तहरू प्रदान गर्न भिडियोको साथ ब्लगिङको फाइदाहरू अझै पनि मेरो पुस्तकमा एक विजेता हो। अल्पसंख्यक मानिसहरूले भिडियो खोजहरू प्रयोग गर्छन् - र ती भित्र, धेरैले भिडियोलाई ठीकसँग वर्णन गर्न समय लिँदैनन्।
दुई संयोजन शक्तिशाली छ तर थोरै समय लाग्छ, यद्यपि। भिडियो ब्लग (पोडकास्टेबल) प्रकाशित गर्न सक्षम हुनु, र प्रत्येक भिडियोको बारेमा ब्लगले निश्चित रूपमा फेला पार्ने सम्भावनाहरूलाई सुधार गर्नेछ!
जनवरी 7, 2009 मा 12: 29 एएम
महान पोस्ट डग। मैले धेरै निजी व्यवसाय मालिकहरूले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरेको देखेको छु। यो न केवल स्प्याम जस्तो देखिन्छ, तर यसले सस्तो स्पामको दुर्गन्ध दिन्छ। राम्रो दृष्टिकोण भनेको अनलाइन सामग्री निर्माण गर्न समय लिनु हो (ब्लग उत्कृष्ट विकल्प हो), विशेषज्ञता सिर्जना गर्नुहोस्, आफ्नो पेशामा उत्कृष्टता देखाउनुहोस्, र खोज परिणामहरू जित्नुहोस्।
जनवरी 7, 2009 मा 7: 42 एएम
डग यो एक महान पोस्ट हो। एक धेरै विविध वेब कम्पनीको रूपमा, हामी निरन्तर रूपमा हाम्रो बिक्री र मार्केटिङ स्थितिलाई प्रभावकारी रूपमा बढाउन सोशल मिडिया प्रयोग गर्ने नयाँ तरिकाहरू खोज्ने प्रयास गरिरहेका छौं। मलाई लाग्छ कि तपाईंले सोशल मिडियाको दुरुपयोगको बारेमा केही धेरै बलियो मुख्य बुँदाहरूमा हिट गर्नुभयो, जुन कुराहरू मलाई लाग्छ विशेषज्ञहरूले पनि दिमागमा राख्नु पर्छ।